Hoggaanka & dadwaynaha New Zealand oo dunida dhowr arrimood baray! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Hoggaanka & dadwaynaha New Zealand oo dunida dhowr arrimood baray!
Hoggaanka & dadwaynaha New Zealand oo dunida dhowr arrimood baray!
(Hadalsame) 29 Maarso 2019 – Bishan Maarso ee aanu ku jirno bartamaheedii ayaa laba Masjid oo ku yaala Magaalada Christchurch ee dalka New Zealand waxaa ka dhacay weerar argagaxisinimo ah halkaas oo dad muslimiin ah oo 50 qof ka badan oo salaada Jimcaha tukanayey uu ku laayey nin cadaan xagjir ah oo naceyb u qaadey muslimiinta iyo dadka soo galootiga ah isagoo sidoo kale dad kale ku dhaawacay weerarkaas bahalnimada ahaa.
Haddaba Jacinda Ardern oo ah haweenayda Ra’iisal wasaaraha ka ah dalka New Zealand ayaa markii uu dhacay weerarkaas argagixso waxa ay qaadey talaabooyin aad usoo jiitey dunida gaar ahaan dadka muslimiinta ah waxaana ka mid ah kuwan:
1. Markii ugu horaysay ee ay hadashay waxa ay dadka ku salaantay salaanta islaamka ka dibna waxay ku tiri iyada oo la hadlaysa muslimiinta wadanku waa wadankinii idinkaa leh kumana tihiin qaxooti dhibta dhacdayna waanu idinla qabnaa oo dhamaanteenba waynu wada murugeysanahay waxaana ay booqatay dadkii dhibana iyada oo xiran xijaab.
2. Waxa ay ugu yeertay dhibtii meesha ka dhacday in ay ahayd ficil argagixiso taasoo filan waa ku noqotay dhamaan cusunsuriyiinti caalamka iyo madaxda reer galbeedka ee ku hadaaqi jiray marka ficiladan oo kale ay dhacaan qofka weerarka gaystay waa qof madaxa looga jiro ama waalan iyadoo hadii uu muslim yahayna u haysta shaabada wayn ee dhahaysa waa muslim argagixiso ah.
3. Waxa ay dhaar ku martay in aanay afkeeda soo marinayn magaca dambilahii dadka xasuuqay inta ay nooshahay ayna muuqiisa arki karin waxaana ay amartay warbaahinta dalkeeda in ay ka qayb qaataan baahinta wararka dadka dhiban oo lagu mashquulo caawintooda iyo garab siintooda waana ta keentay in reer New Zealand is wada garab tagaan muslimiinta halkaa ku nool oo ay la qayb sadaan dhib iyo dheefba.
4. Waxa ay ballan qaaday in la soo rogayo qaanuun lagu xakameeynayo hubka qaybihiisa kala duwan taas oo ah arin muhiima ayna ku dhiiratay iyadu halka wadamo badan oo kale ku dhici kari waayeen.
5. Waxa ay si kal iyo laaba u soo dhawaysay dadka muslimiinta ah iyada oo xijaaban murugo badanina wajigeeda ka muuqato,waxaana markii ugu horaysay taariikhda kulankii baarlamaanka dalka New Zealand lagu furay quraan kariimka ah waxaana ka soo qayb galay dad badan oo muslimiin ah kulankaas baarlamaanka.
6. Waxa ay u balan qaaday dhamaan dadka dhiban in ay wax walba la garab tagan tahay oo ay dawladu bixinayso dhaqaalaha ku baxaya qofkii raba in maydka loogu aaso wadankii uu ka so jeeday looguna qaadi doono.
7. Waxa ay damaanad qaaday amaanka dhamaan masaajida islaamka iyo meelaha muslimiintu ku kulmaan oo dhan.
Dhinaca kale haweenaydan Ra’iisal wasaaraha ka ah dalka New Zealand waa marwo dhalin yaro ah oo aan weli gaarin da’da 40 jirka waxaana ay noqotay haweeyneydii ugu da’da yarayd ee xil ka qabata wadankeeda, iyo sidoo kale haweeynayda ugu da’da yar ee caalamka wadan hogaamisa.
Ra’iisal wasaare Jacinda Ardern waxaa lagu xasuustaa in ay noqotay haweenayda keliya ee iyada oo ilmaheeda yar sidata ka qayb gashay kulankii guud ee qaramada midoobay ee dhacay mar sii horeysay.
Jimcahii New Zealand
Jimcihii xigey midkii dadka la laayay, dadka reer New Zealand waxa ay ku Jumcaysteen meel u dhow masjidu Nuur iyaga oo dhamaan haweenka dalkaas u dhashay ee muslimka aheyn ay wada xijaabnaayeen iyagoo ku ixtiraamaya islaamka.
Waxaa la amray in aadanka salaada jumcaha kor lo qaado waxaana laga baahiyey tv’yada,sidoo kalena dhamaan xarumaha dawlada lagaga dhawaqayey Eedaanka iyadoo guud ahaan wargeysyada wadanka New Zealand oo dhan cinwaan looga dhigay kalmada SALAAM oo af carabi ku qoran..
Waxaa la filayaba in wadankuba mar qura islaam isu bedelo alle ha ka dhigee.
Haddaba waxaas oo dhan Alle ka sakow waxaa u sabab ah ayaa la oron karaa labo qaybood.
1. Dadka muslimiinta ah oo samray iyadoo faa’iidooyinka samirkana qaar ka mid ah aduunka ka helay.
2. Ra’iisal wasaare damiirkeeda bani’ aadanimo uu noolyahay.
Qalinkii: Inj Samaale Mo Soomaali
Previous articleDiiwaangelinta ciidamada Qalabka Sida oo Muqdisho ka socota + Sawirro
Next articleNinkii DAHABKA doonayay (Qaybtii 1-aad)